Izindawo eziyi-10 eSpain ukuze zibalekele ubusika obubandayo | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Spain amadolobha, España, General
Singaphakathi umkhuhlane ogcwele obandayo, futhi iqiniso ukuthi sonke sifuna ukubuyela emuva ngenkathi yasehlobo, kulokho kushisa nasezinsukwini zasolwandle. Ezindaweni ezisenyakatho, maphakathi nezintaba kulapho ziqala khona ukubanda, futhi impela abaningi sebevele bacabanga ukwenza isikhala sokubalekela endaweni ethile efudumele kancane. Kungakho sizokunikeza imibono embalwa.
Kunezindawo eziningi ezisinikeza imfudumalo ethe xaxa ngaphandle kokuhamba eSpain. Futhi ukuthi sinezindawo ezinhle esingazivakashela nezikhala lapho isimo sezulu sihambisana khona kancane kulezi zinsuku, ukuze sikwazi ukubalekela ubusika obubandayo. Qaphela lezi zindawo eziyishumi ezisondele kakhulu, ukuze ukwazi ukujabulela umoya ofudumele futhi ucabange ngehlobo.
ICádiz idolobha elihle ongalahleka kulo. Inabantu abasisiza sizizwe sikhululekile, nendawo endala lapho ungathola khona izitolo ezincane kanye nezikwele ezimaphakathi lapho ungaphuza khona ithala nelanga. Noma kusobala ukuthi isimo sezulu asifani nehlobo futhi kungenzeka singagezi emanzini abadumile Ibhishi laseCaletaYebo, siyazibona zonke lezi zindawo. Futhi uma singabalandeli bezemidlalo yamanzi efana ne-kitesurfing, sisendaweni ekahle.
Uma sishiya inhlonhlo singaya eCeuta, indawo lapho kuhlangana khona amanye amasiko futhi kuningi ongasinika khona. Bona izindonga zasebukhosini, ezisithutha siye ezikhathini ezedlule, noma sihambehamba epaki leMedithera. Kukhona neziqhingi ezincane eziseduze, njengePerejil noma iSanta Catalina. Singahamba futhi ngokuya ezintabeni eMonte Hacho, futhi sizobe siseduze kakhulu neMorocco, uma kwenzeka sifuna ukwenza enye indlela yokubaleka.
IMelilla ngelinye idolobha elisezwekazini lase-Afrika elingeleSpain, futhi lapho singathokozela khona isikhathi esinomona ngalesi sikhathi sonyaka. Singahamba eHernandez Park, kepha okunye okuhehayo kakhulu ukubona i- Inqaba yekhulu le-XNUMX. Isinezindawo ezivalekile ezintathu ezibiyelwe. Ezinye izindawo ongazibona yiPlaza de España noma iMnyuziyamu Yezempi.
E-Alicante ngalesi sikhathi kusabanda, kuyiqiniso, kepha hhayi kubanda njengakwamanye amadolobha asenkabeni noma enyakatho, ngakho-ke kungaba ngumqondo omuhle wokubaleka ngempelasonto. Singakhuphukela kokudala Inqaba yaseSanta Barbara, lapho kukhona khona ukubukwa okumangazayo, futhi ubone isiqhingi saseTabarca, indawo nayo okumele ibonwe njengoba kuyipaki yemvelo.
I-Ibiza ingenye yalezi zindawo ezithakazelisayo esizithola phakathi nobusika. Awukho umoya omningi kulesi siqhingi njengasehlobo, kepha kuyindlela ekhululekile yokukubona. Ngeke siye olwandle kepha singahamba buthule sidlule UDalt Vila futhi amanani nakanjani azokwehla kakhulu kwisizini engaphandle. Kunamakhona amaningi athulile, amadolobha namabhishi ongawabona ngaphandle kokuya ehlobo, lapho konke kugcwele izivakashi.
E-Canary Islands sithola omunye umthambo wokubalekela ubusika obubandayo. Futhi kulokhu singaya ngisho nasogwini lolwandle, ngoba amazinga okushisa angaba ngama-degree angama-25 kulezi ziqhingi. UFuerteventura ungomunye wabo, ngokuvakashelwa okuyisibopho intaba iTindaya, noma ibhishi elidumile laseCofete. Ungavakashela namadolobha amancane, njenge-El Cotillo, noma iLa Ampuyeta.
ILanzarote ingenye indawo okuvame ukuba nabantu ehlobo, kepha ijabulela isimo sezulu esihle unyaka wonke. Kulesi siqhingi singajabulela amabhishi esihlabathi esimnyama, kepha futhi nokuvakasha okufana ne- Ipaki likazwelonke laseTimanfaya, noma iCueva de los Verdes, umhubhe owakhiwa yiCorona Volcano.
Esiqhingini saseTenerife futhi sinokunikezwa okuhle unyaka wonke ngesimo sezulu esihle. Ngeke sithokozele kuphela ichibi lehhotela, kodwa futhi namabhishi anjengePlaya de Los Cristianos noma iLa Tejita. I- Ukuvakashelwa kweTeide Kuyadingeka, ukukhuphuka ngemoto yayo yekhebula ukuze ube nemibono emangalisayo ngesiqhingi. Futhi singavakashela iLoro Parque noma iSiam Park, ipaki yamanzi emnandi kakhulu.
Manje siya eningizimu yenhlonhlo, kanti iMalaga ingaba yindawo enhle ngesikhathi sasebusika. Isimo sezulu sisalungile ukujabulela i- ICosta del Sol, kepha uma lungekho usuku lwasolwandle, sinezinye izinto okufanele sizenze, njengokubona i-Alcazaba noma i-Roman Theatre.
Elinye idolobha eliseningizimu elingasinika izinto eziningi ezithokozisayo. ESeville asitholi nje kuphela indawo endala ethakazelisa kakhulu, kepha kunezikhumbuzo eziningi okufanele sizibone, njengeGiralda, iTorre del Oro noma i- I-Alcazar yangempela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izindawo eziyi-10 eSpain ukweqa ubusika obubandayo
Uxolo kodwa ukhohliwe ukukhuluma nge-Almería. Namuhla ngehora lesibili ntambama bekungu-18 degrees
UGloria Rodriguez kusho
USusana, kufanele ngikutshele ukuthi iGran Canaria yisiqhingi esaziwa ngokuba nesimo sezulu esihle kakhulu emhlabeni ngenxa yemimoya yezohwebo eyenza kube nokushisa okuhle kwentwasahlobo unyaka wonke nokucacisa ukuthi iPlaya del Inglés ayikho eTenerife kodwa eGran Canaria.
IPlaya del Inglés ayikho eTenerife kepha iseGran Canaria, kufanele uhlole izindawo
Angicabangi ukuthi uyazi ukuthi i-COSTA DEL SOL yangempela I-ALMERÍA lapho kunamahora amaningi okukhanya kwelanga ngonyaka kanye nezinga lokushisa elizinzile kakhulu unyaka wonke. Uyasikhohlwa njalo. Yeka ihlazo elingaka ukungazi.
Angazi ukuthi ufunde kuphi kepha ngikunikeza u-0 ukhohliwe i-ALMERÍA lapho sinamazinga okushisa amahle kakhulu kuyo yonke inhlonhlo yize kubalimaza abaningi ...
U-isabel guadalupe sanabria kusho
Iminyaka izodlula futhi sizoqhubeka nokuba yiziqhingi ezinenhlanhla, kepha sikhohliwe impela, madoda, ibhishi laseNgilandi liseGran Canaria, futhi angihambisani nenkulumo yokuthi yilona lolwandle oluhamba phambili kulezi ziqhingi, isiqhingi ngasinye sinaso intelezi namabhishi ayo amahle. Zibhale ngaphambi kokubhala izindatshana. Ngiyabonga.
Phendula u-Ana isabel guadalupe sanabria
Futhi ubungitshelani ngolwandle lwaseLas Canteras?
IGran Canaria yinye kuphela futhi ayiqhathaniseki.
Sijabulela ukushisa okuhle kakhulu.
USusana Garcia kusho
Yebo, ngenze iphutha eselivele lilungisiwe. Ngiyaxolisa ukucasula umuntu uma bekunje kodwa cha, angazi amaphuzu ngamunye waseSpain ngenhliziyo. Noma kunjalo, u-Antonio, ngicabanga ukuthi besingekho isidingo sokuthuka, ngoba sonke singabantu futhi singenza amaphutha, akunjalo?